ကျွန်ုပ်၏အရေပြားအမျိုးအစားအတွက်အဘယ်ဂရုပြုမှုလိုအပ်ပါသလဲ။ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
စာသင်ခန်းယူပါ | | ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, လူနေမှုပုံစံစတဲ့
လူတိုင်းသည်အရေပြားတွင်လိုအပ်ချက်အချို့ရှိပြီးထိုအကြောင်းပြချက်အတွက်သူ၌အချို့လိုအပ်သည် သင်ကိုင်တွယ်ရမည့်ပြtoနာနှင့်အညီအထူးဂရုပြုမှု။ ၎င်းတို့ကိုမည်ကဲ့သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာမသိရှိရသေးပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အရေပြားနှင့်အဘယ်သို့ဖြစ်မည်နည်း၊
သင်၏အသားအရေအဆီပြန်သည်ကိုသိရန် သင်၏နဖူးတွင်အမှောင်စက္ကူတစ်ရွက်နှင့်အခြားပါးတစ်ဖက်ကိုပါးပေါ်တွင်တင်ပါ။ ညင်ညင်သာသာ နှိပ်၍ စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဖယ်ရှားပါ။ ဒါကိုကြည့်ပြီးအဖြူရောင်ကျန်နေတဲ့အရွက်ထွက်လာမလားကြည့်ပါ။ သင်၏အသားအရေသည်အဆီပြန်သည်။
အဆီပြန်အသားအရေ ဝက်ခြံ၊ အမဲရောင်၊ ခေါင်းဖြူသို့မဟုတ်တောက်ပသောအသားအရေဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရေပြား၏အပေါက်များကိုပိုမိုပွင့်လင်းစေသည်။ ထို့ကြောင့်ပိုများသောအမှုန်အငယ်များအကြားရှိအပေါက်တစ်ခုစီအတွင်းတွင်ရှိသည်။
အဆီပြန်သောအသားအရေကိုဂရုစိုက်ရန်၊ သင်တစ် ဦး တစ် ဦး exfoliator နှင့်အတူတစ်ပါတ်မျက်နှာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ အဆီပြန်သောအသားအရေများအတွက်အထူးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသည့်အလင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများဖြစ်သောဂျယ်လ်အမျိုးအစားများကိုအသုံးပြုပါ။
သင့်ရဲ့အစားအစာအတွင်းမှာ သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပါ ၀ င်သည် သငျသညျသာပိုဝစေလိမ့်မည်ဟုကြော်သောသူတို့ကိုရှောင်ရှား။ Pistachios လိုအပြာငါးနဲ့အခွံမာတွေဟာသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်။
အသားအရေခြောက်သွေ့မှုကိုရှာဖွေရန်၊ သင်၏လက်သည်းကိုအသားအရေပေါ်တွင်ညင်ညင်သာသာဖွင့်ပါ၊ အဖြူရောင်လမ်းကြောင်းမှထွက်သွားပါကသင်သည်ခြောက်သွေ့သောအသားအရေရှိသည်။ အသားအရေခြောက်သွေ့မှု၏အကျိုးဆက်များအနေဖြင့်၊ အရေပြားယားယံခြင်း၊ နီခြင်း၊။ အဲဒါကိုဂရုစိုက်ဖို့တစ်ခုထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာမရှိ ဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်း ခြောက်သွေ့သောအသားအရေများအတွက်တိကျတဲ့လိမ်းဆေးနှင့်အတူဆက်လက်။ နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးနောက်အရေပြားခြောက်သွေ့သောအခါမျက်နှာသုတ်ပုဝါနှင့်မဆွဲပါနှင့်၊ ၎င်းသည်ပိုမိုခြောက်သွေ့စေသည်။ သင်၏အသားအရေကိုခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ပါ၊ ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းမှုကိုပိုမိုရရှိစေရန်မုန့်ကိုမသုံးမီအနည်းငယ်စိုစွတ်အောင်ထားပါ။
အစားအစာအတွက်တော့သူတို့ကမင်းကိုကူညီလိမ့်မယ် ရေကြွယ်ဝသောအစားအစာများ နာနတ်သီး၊ ကီဝီ၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ ဖရဲသီးသို့မဟုတ်လိမ္မော်သီးနှင့်အစိမ်းရောင်သစ်ရွက်များကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ကော်ဖီကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ သင်သောက်သုံးရန်သင့်အားအခြားနည်းလမ်းဖြင့်သောက်သုံးစေသည့်ပြုတ်ရည်များကိုသောက်ပါ။
ငါမှန်ထဲမှာကြည့်ပြီးငါမှောင်မိုက်စက်ဝိုင်းရှိသည်မျက်လုံးအိတ်နှင့်ငြီးငွေ့ဖွယ်မျက်နှာတစ်နေ့နှင့်တစ်ညကျွန်ုပ်ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ ငါသည်ငါ့မျက်နှာ၏ဤရှုထောင့်ကိုဘယ်လို fix နိုင်သလဲ တစ် ဦး ကပင်ပန်းအသားအရေaရှိခြင်း၏ဝိသေသဖြစ်ပါတယ် အရေပြားပေါ်တွင်အသေဆဲလ်၏အပိုစုဆောင်းခြင်း။ ထို့အပြင်မှောင်မိုက်စက်ဝိုင်းများနှင့်အိတ်များကြောင့်ဖြစ်သည် အိပ်စက်ခြင်းနှင့်အရည်စုဆောင်းခြင်းမရှိခြင်း.
ဤအရေပြားအမျိုးအစားကိုဂရုစိုက်ရန်နှင့် မင်းလိုအပ်တဲ့စွမ်းအားအားလုံးကိုမင်းကိုပြန်ပေးပါ၎င်းသည်အချို့သောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကိုလိုက်နာရန်လုံလောက်သည် အပတ်စဉ် exfoliation, အတူ moisturizer ကြိုက်တဲ့ဗီတာမင် ဗီတာမင် C ၎င်းသည် antioxidants ကြွယ်ဝပြီးအရေပြားတွင်မရှိသောဗီတာမင်ပမာဏများစွာကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ သင်၏မဟာမိတ်မဟာမိတ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ရန်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်။ မျက်လုံးပုံ အတွက် မှောင်မိုက်စက်ဝိုင်းများနှင့်အိတ်များကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ.
အာရုံစိုက်ပါ မင်းဘာစားတာလဲနှင့်အမျိုးမျိုးသောယူရန်မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့် အနီရောင်၊ လိမ္မော်နှင့်အဝါရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များလိမ္မော်၊ မုန်လာဥ၊ beets သို့မဟုတ်စတော်ဘယ်ရီစသည့်ဗီတာမင်များနှင့်ဓာတ်သတ္တုဓာတ်များများများပါ ၀ င်သည်။ မျက်လုံးမှိတ်တုတ်ဖြင့်သင်၏အသားအရေကိုလတ်ဆတ်မှုကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေမည့်အကောင်းဆုံးဓါတ်တိုးပစ္စည်းမဟာမိတ်များဖြစ်သည်။
Mi မျက်စိနှင့်ပါးစပ်၏အပြင်ဘက်ပုံတွင်ဒဏ်ငွေလိုင်းများရှိသည် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပိုမိုစူးရှဖြစ်ကြပြီးအရေးအကြောင်းတွေဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်။ အစပိုင်းမှာသူတို့ဟာအမှတ်အသားသေးသေးလေးတွေကြောင့်ငါ့ကိုသိချင်ခဲ့ကြပေမယ့်အချိန်ကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှပိုပိုပြီးသိသိသာသာများပြားလာတဲ့အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်လာတယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲ။
ဤအသေးငယ်တဲ့အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့၊ နေရောင်ခြည်နှင့်သင့်လျော်သောဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းထက်ပိုကောင်းသည့်အရာမရှိပါ။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးကာကွယ်သည့်အချက်များဖြင့်အသုံးပြုရန်သတိရပါ၊ သို့မှသာအရေပြားကိုကာကွယ်နိုင်သည်။
လည်းရှိပါတယ် သင့်ကိုကူညီမည့်အစားအစာများ တစ် ဦး ရှိသည်သောသူတို့အားကဲ့သို့ polyphenols ၏မြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှု ဂျုံ၊ စပျစ်သီး၊ ဘလူးဘယ်ရီ၊ ပဲ၊ ပဲ၊
ဒါက ... သငျသညျအဘယျသို့အရေပြားအမျိုးအစားရှိသနည်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု » ကျွန်ုပ်၏အရေပြားအမျိုးအစားအတွက်အဘယ်ဂရုပြုမှုလိုအပ်ပါသလဲ။
၂၀၁၃ နွေ ဦး ရာသီနွေရာသီမှာပုံနှိပ်ထားတဲ့ရှပ်အင်္ကျီအတွက်စာရင်းသွင်းပါ